Kungani ukhetha thina | I-BAODING YINGTESHENG BRISTLE NE-BRUSH MAKING CO., LTD
I-YTS ifake amasethi angaphezu kwekhulu wezinto zokwenziwa kanye nokuhlolwa kwemishini yokuxubha, engathuthukisa ikhono lokukhiqiza le-YTS ngokumangazayo. Ngasikhathi sinye, i-YTS ithuthukise ngokuzimela imishini yokwenza imigwaqo nezinye izinhlelo ngokuya ngezimpawu zayo zokukhiqiza. Imishini yokukhiqiza ezinikele ngokuzenzekelayo ihlukile kunabanye abakule mboni. Ngaphezu kwalokho, singaba nokulawula okuningi ngesikhathi sokulethwa kwemikhiqizo yethu (i-ETD ne-ETA). Manje i-YTS inomkhiqizo wamabhulashi ayizigidi ezingama-50, izigidi ezingama-30 zama-roller kanye namathani angaphezu kuka-3000 wezinto zokwakha.
YTS has abasebenzi abangaphezu kuka-150 yokukhiqiza workshop futhi sonke baye baqaphela semi-othomathikhi futhi othomathikhi ngokugcwele ukukhiqizwa umugqa imisebenzi. Idizayini yezindawo zokusebenzela ihlelekile futhi inengqondo. Imishini yokukhiqiza ilula futhi ihlakaniphile, okulula ukuthi abasebenzi basebenze. Bonke abasebenzi abaku-inthanethi banokuqeqeshwa kobungcweti futhi balandela ngokuqinile inqubo namazinga ekhwalithi. Uhlelo lokulawula ikhwalithi lwe-YTS lukuyo yonke inqubo kusuka kokuqukethwe kwenqama ukuqeda umkhiqizo. Sisebenzisa ukuhlolwa kwamasampula angama-20% no-100% ukuhlolwa okuphelele ngemuva kokuthi yonke imikhiqizo isiqedile.
Ilabhorethri yethu isetshenziselwa ukuhlola amabhulashi ethu nokuthola izindlela zokuyithuthukisa. Senza ukuhlolwa okuningi okuphelele ngaphambi kokuthengisa amabhulashi ethu emakethe, imikhiqizo yethu emisha nayo iyakhiwa kule laboratory.